အရေးပေါ်တားဆေးက ကိုယ်ဝန်မရအောင် ဘယ်လို ကာကွယ်ပေးတာလဲ - YomaLan
ကိုယ်ဝန်ရတယ်ဆိုတာ အမျိုးသားနဲ့ အတူတူနေတာနဲ့ ချက်ခြင်းရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ အတူနေပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ကိုယ်ဝန်မရအောင် တားလို့ ရနိုင်တာပါ။ အားလုံးက အချိန်မှီ၊ အချိန်ကိုက် ဖြစ်နေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အတူနေပြီးနောက် အမျိုးသားရဲ့ သုတ်ပိုးက အမျိူးသမီးရဲ့ ကိုယ်ထဲမှာ ခြောက် ရက်လောက်အထိ အသက်ရှင်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီ ခြောက်ရက်အတွင်းမှာ သားဥကြွေခဲ့ရင် သုတ်ပိုးနဲ့ သားဥပေါင်းပြီး သန္ဓေသားလောင်းလေးအဖြစ် သားအိမ်နံရံမှာ တွယ်ကာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကြီးလာပါမယ်။ ဒါကို ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်လို့ခေါ်တာပါ။
အရေးပေါ်တားဆေးကမမျိုးဥကနေ သားဥမကြွေအောင် ဟန့်တားပေးပါတယ်။ အကယ်၍သာ သားဥကြွေပြီးဖြစ်ရင်တော့ သုတ်ပိုးနဲ့ သားဥလေးနဲ့ မပေါင်းနိုင်အောင် ဟန့်တားပေးနိုင်စွမ်း က တနေ့တလုံးသောက်ဆေးတွေလောက် အာနိသင်မရှိပါဘူး။ ရာသီခွင်ရဲ့ ဘယ်ရက်မှာဆေးသောက်လဲ ဆိုတာရယ်၊ အတူနေပြီး ဘယ်လောက်မြန်မြန်ဆေးသောက်ဖြစ်လဲ ဆိုတာတွေက ကိုယ်ဝန်မရအောင် ဘယ်လောက်ထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကို ဆုူံးဖြတ်ပေးတဲ့ အရေးကြီး အချက်တွေဖြစ်သွားပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် အရေးပေါ်တားဆေးကို အရေးပေါ် အခြေအနေမှသာသုံးသင့်ပါတယ်။ မကြာခဏ အတူတူနေဖြစ်မယ့် အခြေအနေမျိုးရှိရင်/ သုံးလေးရက်ဆက်တိုက်အတူနေပြီး အရေးပေါ်တားဆေးပဲ တနေ့ပြီးတနေ့ သောက်နေတာမျိုးက မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ပုံမှန်သန္ဓေတားနည်းတမျိုးမျိုး (ဥပမာ နေ့စဉ်သောက်တားဆေး၊ သုံးလခံထိုးဆေး၊ ကွန်ဒုံး၊ သားအိမ်ထဲထည့် ပစ္စည်း၊ လက်မောင်းအရေပြားအောက် ထည့်ပစ္စည်း) ကို သုံးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
နောက်တခုရှင်းပြချင်တာက အရေးပေါ်တားဆေးက တချို့တွေ အမှတ်မှားနေသလို ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတဲ့ဆေး မဟုတ်ပါဘူး။ အကယ်၍သာ ဆေးသောက်တဲ့ အချိန် နောက်ကျလို့ သားလောင်းလေးက သားအိမ်နံရံမှာ တွယ်ကပ်ပြီးသား ဖြစ်ရင်တော့ (ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့ဆိုလိုတာပါ) ကိုယ်ဝန်ဆက်ရှိသွားမှာဖြစ်သလို ဆေးကြောင့် သန္ဓေသားလောင်းပေါ်မှာ ထိခိုက်မှု မဖြစ်စေပါဘူး။
1. WHO: Family Planning, Global Handbook for providers 2011 update
2. Emergency Contraception_How do you take EC. Family Planning NSW Fact Sheet. NSW. Australia.
3. Emergency Contraception (Morning after pill and IUD) NHS Choices Health A-Z. Contraceptive Choices. UK.
#mate #ECpills #OCpills #အရေးပေါ်တားဆေး #ဆေးကဒ် #တားဆေး #စိတ်ချ #ကိုယ်ဝန် #ကိုယ်ဝန်တား #သန္ဓေတား #ကဒ်ဆေး #တားဆေးကဒ်
ကိုယျဝနျရတယျဆိုတာ အမြိုးသားနဲ့ အတူတူနတောနဲ့ ခကျြခွငျးရတာမဟုတျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့မို့ အတူနပွေီး ရကျအနညျးငယျအတှငျးမှာ ကိုယျဝနျမရအောငျ တားလို့ ရနိုငျတာပါ။ အားလုံးက အခြိနျမှီ၊ အခြိနျကိုကျ ဖွဈနဖေို့ အရေးကွီးပါတယျ။
အတူနပွေီးနောကျ အမြိုးသားရဲ့ သုတျပိုးက အမြိူးသမီးရဲ့ ကိုယျထဲမှာ ခွောကျ ရကျလောကျအထိ အသကျရှငျနိုငျပါတယျ။ အကယျ၍ ဒီ ခွောကျရကျအတှငျးမှာ သားဥကွှခေဲ့ရငျ သုတျပိုးနဲ့ သားဥပေါငျးပွီး သန်ဓသေားလောငျးလေးအဖွဈ သားအိမျနံရံမှာ တှယျကာ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ကွီးလာပါမယျ။ ဒါကို ကိုယျဝနျရှိတယျလို့ချေါတာပါ။
အရေးပျေါတားဆေးကမမြိုးဥကနေ သားဥမကွှအေောငျ ဟနျ့တားပေးပါတယျ။ အကယျ၍သာ သားဥကွှပွေီးဖွဈရငျတော့ သုတျပိုးနဲ့ သားဥလေးနဲ့ မပေါငျးနိုငျအောငျ ဟနျ့တားပေးနိုငျစှမျး က တနတေ့လုံးသောကျဆေးတှလေောကျ အာနိသငျမရှိပါဘူး။ ရာသီခှငျရဲ့ ဘယျရကျမှာဆေးသောကျလဲ ဆိုတာရယျ၊ အတူနပွေီး ဘယျလောကျမွနျမွနျဆေးသောကျဖွဈလဲ ဆိုတာတှကေ ကိုယျဝနျမရအောငျ ဘယျလောကျထိ ကာကှယျပေးနိုငျလဲဆိုတာကို ဆုူံးဖွတျပေးတဲ့ အရေးကွီး အခကျြတှဖွေဈသှားပါတယျ။
အဲဒါကွောငျ့ အရေးပျေါတားဆေးကို အရေးပျေါ အခွအေနမှေသာသုံးသငျ့ပါတယျ။ မကွာခဏ အတူတူနဖွေဈမယျ့ အခွအေနမြေိုးရှိရငျ/ သုံးလေးရကျဆကျတိုကျအတူနပွေီး အရေးပျေါတားဆေးပဲ တနပွေီ့းတနေ့ သောကျနတောမြိုးက မလုပျသငျ့ပါဘူး။ ပုံမှနျသန်ဓတေားနညျးတမြိုးမြိုး (ဥပမာ နစေ့ဉျသောကျတားဆေး၊ သုံးလခံထိုးဆေး၊ ကှနျဒုံး၊ သားအိမျထဲထညျ့ ပစ်စညျး၊ လကျမောငျးအရပွေားအောကျ ထညျ့ပစ်စညျး) ကို သုံးဖို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။
နောကျတခုရှငျးပွခငျြတာက အရေးပျေါတားဆေးက တခြို့တှေ အမှတျမှားနသေလို ကိုယျဝနျဖကျြခတြဲ့ဆေး မဟုတျပါဘူး။ အကယျ၍သာ ဆေးသောကျတဲ့ အခြိနျ နောကျကလြို့ သားလောငျးလေးက သားအိမျနံရံမှာ တှယျကပျပွီးသား ဖွဈရငျတော့ (ကိုယျဝနျရှိနပွေီလို့ဆိုလိုတာပါ) ကိုယျဝနျဆကျရှိသှားမှာဖွဈသလို ဆေးကွောငျ့ သန်ဓသေားလောငျးပျေါမှာ ထိခိုကျမှု မဖွဈစပေါဘူး။
#mate #ECpills #OCpills #အရေးပျေါတားဆေး #ဆေးကဒျ #တားဆေး #စိတျခြ #ကိုယျဝနျ #ကိုယျဝနျတား #သန်ဓတေား #ကဒျဆေး #တားဆေးကဒျ